भुकम्पपछि महिलामा मनोसामाजिक समस्या बढ्यो |
भुकम्पपछि महिलामा मनोसामाजिक समस्या बढ्यो
प्रकाशित मिति :2017-07-16 15:34:32
दोलखा । भीमेश्वर नगरपालिका, १ सुष्पा क्षमावतीकी विमला थामीको घर ०७२ बैशाखको भुकम्पले भत्कियो । भुकम्पले उनको घर मात्र भत्किएन मन पनि भत्कियो । अकास्मात् आईपरेको यस्तो विपतीको सामना गर्नुपरेपछि उनको मन थामीसक्नु भएन, उनी विक्षिप्त बनिन् ।
भुकम्पले घर भत्किए पछि कहाँ जाने ? कहाँ बस्ने भन्ने तनाब भयो विमलाले भनिन् – निरन्तरको तनावले घरमा काम गर्न पनि मन नलाग्ने, कसैसँग बोल्न पनि मन नलाग्ने, एक्लै बस्न मन लाग्ने हुन थालेपछि उपचार गर्न आएँ ।’
भीमेश्वर नगरपालिका, १ सुष्पा क्षमावतीकै निशा थामीको समस्या पनि बिमलाको जस्तै छ । भुकम्प पछि मानसिक तनावमा पर्नु भएको २५ वर्षकी निशा टाउको दुख्ने, मनमा कुरा खेलिरहने, मन थिरमा नहुने जस्ता समस्या बढ्दै गएपछि उपचारको लागि आएको बताउँछिन् ।
मानसिक अस्पताल लगनखेलले दोलखा सदरमुकाम चरिकोट र जिरीमा प्रत्येक महिना सञ्चालन गर्ने बहिरङ्ग स्वास्थ्य शिविरमा मनोसामाजिक समस्या लिएर उपचारको लागि आउने बिरामीको संख्यामा बृद्धि हुदै गएको शिविरमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।
शिविरमा संलग्न डा. बासु कार्की महिलाहरुमा बढी पारिवारीक तथा सामाजिक तनाव हुने भएकोले मनोसामाजिक समस्या महिलामा बढी पाईएको बताए । भुकम्प पछि हरेक परिवारमा समस्या बढेकोले पनि महिलाहरुमा मनोसामाजिक समस्या बढी देखिएको डा. कार्कीको भनाई छ ।
मानसिक अस्पताल लगनखेलले गरेको स्वास्थ्य शिविरमा उपचारका लागि जाने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशत महिला हुने डा. बासु कार्कीले जानकारी दिए । कतिपयले मनोसामाजिक समस्या भएको मानिसलाई पागल ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै डा. कार्की यो समस्या उचित परामर्शबाट समाधान हुने बताउँछन् ।